दूध, सामान्यकृत यो के हो?
खाद्य र पेय पदार्थ, कम क्यालोरी उत्पादनहरु
शैशवकालदेखि हामी सबै दूध पिउन। र कुनै एक यो (विशेष गरी आमा) प्रत्येक बच्चाको लागि उपयोगी र आवश्यक छ भन्ने संदेह। वयस्क बनेर, हामी अक्सर यो उत्पादन प्रयोग बारे भूल, कम र कम प्रयोग गर्न सुरू गरिन्छ।
केही किनभने बस "मानकीकृत दूध" बजार मा सबै भन्दा साधारण छ यसलाई स्वीकार्दैनन्। यो पक्कै पनि के थियो थाह छैन: "म किन्न र यो उत्पादन प्रयोग यसलाई त्यहाँ कुनै पनि लाभ straights यदि गर्नुपर्छ ???" त्यो भन्दा अक्सर खरीद दूध डर जवान छोराछोरीलाई दिन भनेर कारण के छ।
यसलाई के मतलब मानकीकृत दूध गर्छ?
दूध वा अन्य डेयरी उत्पादन को प्याकेजिङ्ग मा, पढ्न सक्नुहुन्छ: "प्रयोग दूध सामान्यीकृत"। यो के हो र यो प्राप्त छ कसरी, केही मान्छे थाहा छ। धेरै यस्ता दूध दूध पाउडर, भिटामिन को थालनी रकम समावेश गर्दैन देखि उत्पादन छ भन्ने गलत विश्वास पकड। वास्तवमा, टाढा बाट। मानव खपत उत्पादनको लागि अनुपयुक्त छ भन्ने लेबल "दूध सामान्यीकृत," देखेर लाग्छ छैन। प्रशोधनका लागि एक कच्चा माल रूपमा कम्पनीको दूध गर्न भर्ना मा, यो (शून्य बोसो) र क्रीम सम्बोधन गर्न विभाजित छ, पूर्ण degreased छ। खट्टा क्रीम, घरेलु पनिर र अन्य उत्पादन, आफ्नो normalization प्रक्रिया बनाउन को लागि प्रयोग भविष्यमा विभिन्न दूध बोसो मा भन्ने तथ्यलाई आधारित: थप्दा द्वारा दूध झिकिएको क्रीम को एक इच्छित राशि, बोसो उत्पादन को दिइएको प्रतिशत हासिल।
जहाँ मानकीकृत दूध प्रयोग गरिन्छ?
कुनै पनि उत्पादन को निर्माण को लागि डेयरी उद्योग, बिल्कुल को अपवाद संग बोसो-मुक्त घरेलु पनिर, दूध सामान्यीकृत प्रयोग गर्नुहोस्। के छ - हामी पहिले नै थाहा: संसाधन उत्पादनमा बोसो को एक निश्चित प्रतिशत पुगेको छ कि शब्द हो। दूध बोसो को मानक उपाय द्वारा सामान्यीकृत गर्न सकिन्छ वा द्वारा आवश्यक छ भने, निर्माता द्वारा सेट। दही, अमिलो तर, घरेलु पनिर, क्रीम, प्रशोधन पनीर वा धूम्रपान - सबै मानकीकृत दूध उत्पादन। तिनीहरूले मात्र बिल्कुल अहानिकारक, त्यसको विपरीत, एकदम उपयोगी छन्, तर। साथै, यो प्रक्रिया छैन कि अन्य, कच्चा माल प्रशोधन को चरणमा को बस रूपमा छ।
को मानकीकृत दूध उपयोगी छ?
Pasteurized, मानकीकृत दूध वास्तवमा पेय नै पसलहरूमा मा बेच्न सक्छ, वा अन्य उत्पादनहरु को एक घटक हुन। कुनै पनि मामला मा, यो एकदम सबै उमेर को मान्छे को लागि लाभदायक छ। यो शरीर क्याल्सियम, फस्फोरस, पोटासियम, बी भिटामिन, आवश्यक समावेश भिटामिन एच र अन्य उपयोगी पदार्थ। त्यहाँ दूध सामान्यकृत छ भन्ने तथ्यलाई केही गलत वा खतरनाक छ। यो कस्तो अर्थ राख्छ? यो अर्थ मात्र एउटा कुरा: को प्रक्रिया मा pasteurization र normalization मात्र रहने कि यसको संरचना हो हानिकारक सूक्ष्मजीवहरु, र भिटामिन र अन्य उपयोगी घटक हत्या। तिनीहरूले कुनै पनि डेयरी उत्पादन को उत्पादन प्रक्रियामा सुरक्षित छन्। निष्कर्ष स्पष्ट छ: सामान्यीकृत दूध राम्रो छ! त्यसको विपरीत, यो प्रयोग गर्न डराउनु हुँदैन, यो स्वास्थ्य कायम राख्न सिफारिस गरिएको छ।
लाभ र रातो स्याउ को गरमी सामाग्री
के बाट खाद्य पदार्थ वजन?
स्याउ: प्रति 100 ग्राम को ताप सामग्री। स्याउ क्यालोरी, प्रयोगको र पोषण मूल्य
Fashionistas लागि जापानी भोजन: प्रति रोल क्यालोरी कति?
कावीयार "लाल सुन।" सुविधा र उत्पादन को विशेषताहरु
वजन कम गर्न स्वस्थ नाश्ता। वजन लागि उचित नास्ता: व्यञ्जनहरु
को "आईफोन" रूपमा बिना पासवर्ड सबै सेटिङहरू रिसेट गर्न?
Dzhemete मा आराम। "Petrograd फोर्ट" र अन्य होटल
खुरमा "Wren" - को रहस्यमय फल
"निसान Kabstar": फोटो, मालिकको समीक्षा, प्रौद्योगिकी विशेषताहरु
संग्रहालय, Ulyanovsk: इतिहास, फोटो, ठेगाना, शीर्षकमाथिको घण्टा
"स्मार्ट हाउस" को Arduino मा: सिद्धान्त र अभ्यास
बंधक: अधिकतम परिशोधन अवधि
Anapa मा पानी को तापमान - यो पौडिरहेका जाने समय?
कसरी taller बन्न सिक्न
यो के हो - रूसमा सबैभन्दा उत्कृष्ट नाटक?
पार्किङ "पार्क र फ्लाई" Vnukovo फोटो, समीक्षा
सुजुकी स्विफ्ट - एक विशाल घर संग कम्पैक्ट कार